तपाईको कतै पिसाब थाम्ने बानी त छैन ? यस्तो खतरनाक रोग लान सक्छ, सावधान ! - ज्ञानविज्ञान
पिसाब रोक्ने चिज होइन। फाल्नुपर्ने चिज साँचेर राख्नु हुँदैन।
पिसाब फेर्दा कन्नुपर्छ ?
उमेर बढ्दै जाँदा पुरुषको शरीरमा हुने प्रोस्टेट ग्रन्थि पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्दै जान्छ। अहिले नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष रहेको छ। आयु वृद्धिसँगै प्रोस्टेट ग्रन्थि पनि वृद्धि हुने भएकाले यसका बिरामी बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
प्रोस्टेट ग्रन्थि वृद्धि हुँदै जाँदा यसले विस्तारै मूत्रनली (पिसाब बाहिर निष्कासन गर्ने नली) मा दबाब दिन थाल्छ। मूत्रनली च्याप्न सुरु गर्छ। पिसाब फेर्न धौ—धौ हुन्छ। चालीस वर्षदेखि यो ग्रन्थिको वृद्धि हुँदै गए पनि ६० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई यसले बढी सताएको छ। वंशाणुगतरूपमा पनि यो समस्याले पिरोलेको पाइएको छ। वंशमा कसैलाई प्रोस्टेटको समस्या देखा परेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको प्रोस्टेट बढ्ने समस्या देखिने गरेको वरिष्ठ युरोलोजिस्ट डा. उत्तम शर्मा बताउनुहुन्छ। अभिभावकमा यो समस्या छ भने सन्तानमा हुने सम्भावना बढी देखिएको छ।
-पिसाब गर्न लाग्दा तत्कालै नआउने
-पिसाब गर्न गाह्रो भइ बल लगाउनुपर्ने
-पिसाब तुरुरु नगई थोपा/थोपा झर्ने
-पिसाबको धार तथा बहाब नजिकै खस्ने
-पिसाब फेरेपछि ननिख्रिएको महसुस हुने
-पिसाब फेरे पनि सन्तोष अनुभूति नहुने
-रातको समयमा पटकपटक पिसाब लाग्ने
-पिसाब थाम्न नसक्ने
-पिसाब पोल्ने, मूत्रनलीमा दुखाइ अनुभूति हुने
-पिसाबमा रगतसमेत देखिने
-पर्याप्त पानी पिउने
-पिसाब चाँडै फेर्न नपरोस् तथा पिसाब सङलो फेर्न सकिने गरी पानी सेवन गर्ने
-प्रशस्त हरिया सागपात, फलफूल, तरकारी खाने
-भिटामिन सीयुक्त खानेकुरा टमाटर, गोलभेंडा,
-बन्दगोभी, फूलगोभी, ब्रोकाउली, केराउ
-काजु, बदाम, ओखर
-टुसा उम्रेका गेडागुडी
-रातो मासु, मसला
-पिसाब रोकेर नबस्ने
-लामो समयसम्म थैलीमा पिसाब सञ्चय हुन नदिने
-पिसाब संक्रमण हुन नदिने
-हलुका व्यायाम तथा प्रणायाम गर्ने
-एउटै आसनमा लामो समय नबस्ने
-तनावपूर्ण काम सकभर नगर्न
-हतास र तनावमा नबस्ने
-समयमै जाँच गर्ने
मिर्गौला स्वस्थ राख्न थाहा पाउनुपर्ने सात महत्त्वपूर्ण कुरा
पिसाब पोल्ने समस्या हामी धेरैलाई हुनसक्छ । कतिपयले हिचकिचाहाटले पनि यो समस्या लुकाइराखेको हुन्छौं । पिसाब पोल्ने धेरै कारणहरु मध्य धेरैलाई देखिने कारणहरु बारे यहाँ चर्चा गरिनेछ ।
पिसाब पोल्ने कारणहरु के हुन ?
-मुख्यतः पिसाव पोल्ने प्रमुख कारणमा पिसाव नलीको संक्रमण नै हो । पिसाब नलीको संक्रमण महिलाहरुमा धेरै देखिने गर्छ । गर्भवती अवस्थामा पनि यो धेरै देखिने समस्या हो ।
-मिर्गौला, पिसाब जाने नली वा मूत्राशयको पत्थरीले पनि पिसाब पोल्ने लक्षण देखिन सक्छ । पत्थरीको कारणले
-मुत्रनलीमा संक्रमण हुन मद्दत पुराउँछ र पिसाब पोल्ने लक्षण देखिन्छ ।
-विभिन्न यौनरोगहरु जस्तै गोनिरिया, क्लामैडिया आदिमा पनि पिसाब पोल्ने समस्या देखिन सक्छ ।
-पुरुषलाई पिसाब पोल्ने अन्य कारणहरु प्रोस्टेट ग्रन्थीको संक्रमण वा उमेर बढ्दै गएपछि प्रोस्टेट ग्रन्थीको आकार बढ्नु पनि हो ।
पिसाब पोल्ने संगसंगै अरु के लक्षण देखिन सक्छ ?
यी रोगहरुमा पिसाब पोल्नेका साथसाथै अन्य निम्न लक्षणहरु पनि देखिन सक्छ ।
-पिसाब गर्न गाह्रो हुने वा दुख्ने
-चाडो चाडो पिसाब लाग्ने
-पिसाब थाम्न गाह्रो हुने
-पिसाबमा रगत देखिने
-पिसाबको रंग बदलिने वा गाडा हुने
-दायाँ वा बायाँ कम्मर दुख्ने
-ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, काम्ने, चिडचिड पसिना आउने
माथिका लक्षणहरु देखिएमा तुरुन्त अस्पताल गएर पिसाब पोल्नुको कारण के रहेछ भनेर जानकारी लिइहाल्नुपर्छ । त्यसको निम्ति अवस्था हेरेर चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम पिसाबको जाँच, रगतको जाँच, भिडियो एक्सरे आदि गराउनुपर्छ ।
पिसाब पोल्ने एउटा लक्षण मात्र भएकाले कुन रोगको कारण यो लक्षण देखिएको हो थाहा पाएर त्यसै अनुरुप उपचार गराउनु पर्छ । संक्रमण भएमा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम घरैमा वा अस्पताल बसेर एन्टीबायोटिक खानुपर्छ । पत्थरीको भएको भए आकार अनुसार शल्यक्रिया गरेर वा नगरेरै पनि अन्य विधिबाट उपचार गर्न सकिन्छ ।
पिसाब पोल्नबाट बच्ने उपायहरु
यथेष्ट मात्रामा पानी पिउने । कम्तीमा पनि दीनको दुई लिटर पानी पिउनाले संक्रमण वा पत्थरी दुबैमा फाइदा गर्छ र पिसाब पोल्ने कम हुन सक्छ । यौनाङ्गको सरसफाइमा ध्यान दिनाले संक्रमणबाट जोगिन मद्दत पुर्याउँछ । यौनरोगहरुबाट बच्न विभिन्न सावधानीका उपायहरू अपनाउने ।
साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ । धन्यवाद
Don't Miss it के तपाई कपाल झर्ने समस्याले हैरान हुनुभएको छ ? यस्ता छन् सजिला घरेलु उपचार बिधि – जान्नुहोस्
Up Next फलफूल खाने तरिका थाहा पाउनुहोस्
भुइँमा सुत्ने बानी बसाल्दा सताउँदैन कुनै समस्याले
जाडोमा यी पाँच फलफूल खान नछुटाउनुस्
बलिउड अभिनेत्री कसरी आकर्षक देखिन्छन् ? यस्तो छ सूत्र
बलिउड अभिनेत्री कसरी आकर्षक देखिन्छन् ? यस्तो छ सूत्र अभिनेत्री हुनका लागि दुई अघोषित सर्त छ, आकर्षक रुपरंग र दमदार अभिनय…
कुन राम्रो नर्मल डेलिभरी र सिजेरियन डेलिभरीमा ?
गर्भवतीले प्रसव पीडाका डरले सिजेरियन गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । जुन गलत हो । कतिपयमा नर्मल डेलिभरी गर्दा यौन आनन्दमा…
यसो गर्नुहोस् हातगोडा फुस्रा भएमा
हातगोडामा हुने यी सबैखाले समस्याबाट टाढा रहन जाडोमा साबुनपानीले धुने काम पूर्ण बन्द गर्नुपर्छ । जाडोमा मोजा गनाउने समस्या भयो भने…